Isizinda se-Ultrasonic sama-polyphenols - Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Isizinda se-Ultrasonic sama-polyphenols"
Ama-polyphenols noma ama-polyhydroxyphenols ayizingxube zamakhemikhali ezenzeka emvelweni, kodwa futhi zingahlanganiswa ngamakhemikhali. Njengoba ama-polyphenols esebenza njengama-antioxidants, ayaziwa ngokuthi ama-bio-complements anempilo futhi ukusetshenziswa kokudla okune-polyphenol okufana nezithelo, imifino, okusanhlamvu, itiye nekhofi kuxhunyaniswa nengozi encishisiwe yezifo ezingamahlalakhona.
Izithelo ezinjenge amajikijolo, amagilebhisi, ama-apula, ama-pears nama-cherries zibonisa okuqukethwe okuphezulu kwe-polyphenol okuqukethe kufika ku-200-300mg polyphenols ngesisindo esingama-gramu ayi-100. Kamuva, imikhiqizo eyenziwe kulezi zithelo, nayo iqukethe inani elikhulu lama-polyphenols.
Isigaba sama-polyphenols sifaka ama-tannins, ama-catechins, ama-epintchins, ama-flavanones, ama-isoflavones, ama-phloridzin, ama-quercitin njll. Ekudla, ama-polyphenols anikela ekufuthumeni, ku-astringency, umbala, ukunambitheka, iphunga nokuqina kwe-oxidative. Ngakho-ke, okokukhishwa kwe-polyphenol, isib. Kusuka kwesikhumba samagilebhisi, imbewu yamagilebhisi, i-olive pulp, i-peel yamawolintshi, noma amagxolo kaphayini wasolwandle, athengiswa njengezithako zokudla okusebenzayo, izithasiselo zokudla, nezimonyo.
Njengama-metabolites wesibili wezitshalo, ama-polyphenols akhiwe ngaphakathi kwe-matrix yeseli. Ukuze ukhiqize ukudla okune-polyphenol eningi njengamafutha omnqumo, iwayini, iziphuzo, ama-purees noma okukhishwe, ama-polyphenols kumele akhishwe kumaseli ezitshalo. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela enamandla yokugqekeza izakhiwo zamaseli ze-botanicals futhi uzikhiphe zingene ketshezi oluzungezile. Njengenqubo engeyona eyokushisa, isizinda se-ultrasonic ivimbela ukubola okushisayo kwama-polyphenols okushisa. Ngasikhathi sinye, i-sonication iyindlela yokuqinisa inqubo, ekhulisa isivuno sokukhishwa futhi isheshise inqubo yejubane. Isizinda se-Ultrasonic sisetshenziselwa ukukhipha izingcweti eziphakeme kakhulu ze-polyphenol. Kutholakala kusuka kwelebhu kuya esikalini sezimboni, amaprosesa we-ultrasonic angafakwa kalula kumugqa wakho wokukhiqiza ukuze uthuthukise inqubo yakho yokukhipha.
Funda kabanzi ngezinzuzo zokukhishwa kwe-polyphenols ye-ultrasonic kusuka ezintweni zokusetshenziswa ezingavuthiwe ze-botanical!